भलिबल खेलाडी सञ्जय र मञ्जु सम्मानित | Hamro Khelkud
भलिबल खेलाडी सञ्जय र मञ्जु सम्मानित
बुधबार, असोज ५, २०७३
सञ्जय स्मृती प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीद्धय सञ्जय अर्याल र मञ्जु गुरुङलाई बुधबार सम्मान गरेको छ । प्रतिष्ठानको तर्फबाट नयाँ शंक्ति नेपाल पार्टीको संयोजक एवम पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भंटराईले सम्मान गरे । दुवैलाई दोसल्ला, सम्मान पत्र र जनही २५ हजार नगद प्रदान गरियो ।
सञ्जय र मञ्जु राष्ट्रिय भलिबल टोलीको उप कप्तान हुन । दुबै एक दशक भन्दा अघि देखी राष्ट्रिय टोलीबाट भलिबल खेल्दै आएका छन । घरेलु भलिबलमा सञ्जय नेपाल पुलिस क्लब र मञ्जुले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट खेल्ने गर्छिन । सम्मान कार्यक्रममा डा. भंटराईले नेपाल खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाउँदा गर्व महशुस भएको बताए ।
‘देशले सोचे अनुसार प्रगति गर्न नसकेको बेला हाम्रा खेलाडीले जनतालाई खुसी दिएको छन । राजनिति मतभिन्नताले देश अप्ठयारो परेको बेला नेपाली खेलाडीले जनतालाई एकता, राष्ट्रियता र सहकार्यका लागी सन्देश दिएका थिए । भलिबल, मलाई मन पर्ने खेल हो । नेपालको माटो सुहाउँदो खेल हो भलिबल ।’ डा. भंटराईले थपे,‘ खेल्न सहज, गाउँघरमा त भलिबल मानिसको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । हामीले अनुभव गरेको कुरा हो भलिबल नेपालको लोकप्रिय खेल हो ।’
भंटराईले नेपाली खेलकुदमा थुप्रै सम्भावना भएपनि सकारात्मक रुपमा अगाडी बढे धेरै सफलता हासिल गर्न सकिने बताए । उनले थपे, ‘ म
प्रधानमन्त्री भएकोबेला खेलाडीको सफलता अनुसार सम्मान गर्नु पर्छ भनेर सम्मानको सूरुआत गरेको थिए । तर पछि त्यसले निरन्तरता पाएन । थुप्रै कमजोरी छन खेककुदमा । तर हामी आसावादी भएर अगाडी बढनु पर्छ ।’
दुई वर्ष अघि प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय भलिबल टोलीका कप्तान इम राना र महिला टोलीकी पुर्व कप्तान निता शाहलाई सम्मान गरेको थियो । बुधबार सम्मानित भएकी मञ्जु गुरुङले भविष्यमा थप मेहनत र उपलब्धी हासिल गर्ने हौसला मिलेको बताइन । उनले भनिन, ‘सम्मान गरेकोमा प्रतिष्ठान परिवारलाई धन्यावाद । खेलाडीलाई यस्ता सम्मानले हौसला थप्छन । र खेलमा थप मेहनत गर्न प्रेरणा मिल्छ ।’